Iimephu xa ucinga iinqwelo-moya-Geofumed
Iimaphu xa ufuna iindiza
NgoJuni, 2009 Google umhlaba / imephu, Internet kunye neBlogs, Uhambo
Ukufumana i-API ye-Google akusayi kuphanga kwinani elikhulu lamashishini kwi-intanethi. Icandelo eliye laphumelela ngakumbi xa kuthengiswa ityitile yeenqwelo zomoya ezibonakala zifumene ukufumana kakuhle.
Ngexesha elide ndacinga ukuba le nkonzo ayidingekanga kubaqhubi beehambo, kodwa imihla ngemihla iindawo ezintsha, kwaye kufuneka ndiphendulele kwelinye lazo ekuhambeni kwam ekugqibeleni xa ndifanele nditshintshe indlela yam yokubuya ngomzuzu wokugqibela. Nangona isisombululo se-flight singasombululwa ngumboneleli wam wokuhamba, ukuba nemizuzu ye-40 kuphela ukufumana ihotele yayingeke kwenzeke ngaphandle kwezi ziza; kwakudingeka kuphela ukubeka umhla, isixeko kunye nokulungele ... ukukhetha.
Ndakwazi ukwenza ukubhuka kwintengo ephantsi, nthabana ngokuthula ngaphandle kokukhathazeka ukuba ndiza kufika kwindawo engaziwayo kwi-10 ebusuku.
Elinye lamasayithi, kunye nobukhulu obukhulu eSpain yi-Destinia, ngaphandle kwe-injini elula yokukhangela i-intanethi yongeze i-API ye-Google. Jonga umzekelo, ukuba ndikhangele Iindwendwe zaseMadrid - iMallorca, khetha nje iinkcukacha zohambo ezifana nemini, inani labalingane ... kwaye ucinezela iqhosha le-orange.
Imephu engezantsi yakhiwe kwi-Google Maps API ebonisa imvelaphi, indawo kunye nomgca ochanekileyo odibanisayo.
Ukongezelela, unokubona ulwazi oluncedo olufana nomda wexesha, izinga lokushisa kunye nedatha yemozulu yeendawo zombini.
Ekugqibeleni, ngaphezu kokuhlanganiswa kweemephu, ezithandekayo ngenxa yam yokubambisana kunye nomxholo, ukusebenza kwekhasi kunamandla kakhulu ekukhangela izisombululo ezahlukeneyo ezihambelana nokuhamba njenge:
Kwaye ke, iindiza ephantsi
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuhambela Ukufudukela kwiSofthiwe yamahhala
Post Next Kuphi ukufumana imephu kwifomathi ye vectorOkulandelayo "
Enye Impendulo kwi "Iimephu xa ufuna iinqwelo-moya"
Ngokuqinisekileyo ukubonakala kwe-googlemaps kuye kwaba yinto ebalulekileyo, kungekuphela nje ukufumanisa iinqwelo-moya ngokusebenzisa izixhobo ezininzi, kodwa kuye kwathetha indlela enkulu yokuququzelela ukufika kuyo nayiphi na indawo ehlabathini ngeenkcukacha kunye nomgangatho.